बाउछोरीको सम्बन्धबारे बोले सपना,अनावश्यक टिप्पणी भएको भन्दै पोखिन गुनासो कानुनी उपचार खोज्ने चेता''वनी - Onlines Time
December 4, 2020 by onlinestime
सुन्दर दे’खिन अनुहार राम्रो भएर मात्रै हुँदैन। अनुहारका साथै हातगोडाको हे’रचाहमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । चिसो मौसममा त छाला झन् ख’स्रो हुन्छ। धेरैको ध्यान अनुहारको खस्’रोपन ह’टाउनेतिर मात्र जान्छ। हातको छालामा भएको खस्’रो कम गर्न त्यति ध्यान दिइँदैन । तर हातको हे’रचाह र न’रमपनमा उत्तिकै विचार पुर्यानुपर्छ। जाडोमा हात नरम बनाउन केही घ’रेलु वि’धि अ’पनाउन सकिन्छ। -दैनिक चिसो पानीमा हात खे’लाउनासाथ लो’सन प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले हातलाई न’रम बनाउनुका साथै छालालाई च’म्किलो पनि बनाउँछ।
-राति सुत्नुअघि छालामा क्रि’म बे’स मो’स्चराइजर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा त्रिम हातमा राम्ररी बस्छ। -नु’हाउने समयमा हातमा तेल वा क्रि’म लगाउनु पर्छ । नु’हाएपछि शरीरमा ब’डी लो’सन या क्रि’म लगाउनाले छालालाई नरम बनाउँछ । -प्रयोग गर्ने तेल तिल या जै’तुनको रो’ज्नु राम्रो हुन्छ । छाला धेरै फु’स्रो छ भने ब’दामको तेल त’ताएर लगाउन सकिन्छ। शरीरभर मा’लिस गर्न पनि सकिन्छ। -एक चम्चा तिलको तेल, एक चम्चा ब’दामको तेल तथा एक चम्चा गहुँको तेलको मि’श्रण बनाएर हात तथा न’ङमा दैनिक लगाउँदा फा’इदा हुन्छ।
राति सुत्नुअघि छालामा क्रि’म बे’स मो’स्चराइजर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा त्रिम हातमा राम्ररी बस्छ। -नु’हाउने समयमा हातमा तेल वा क्रि’म लगाउनु पर्छ । नु’हाएपछि शरीरमा ब’डी लो’सन या क्रि’म लगाउनाले छालालाई नरम बनाउँछ । -प्रयोग गर्ने तेल तिल या जै’तुनको रो’ज्नु राम्रो हुन्छ । छाला धेरै फु’स्रो छ भने ब’दामको तेल त’ताएर लगाउन सकिन्छ। शरीरभर मा’लिस गर्न पनि सकिन्छ। -एक चम्चा तिलको तेल, एक चम्चा ब’दामको तेल तथा एक चम्चा गहुँको तेलको मि’श्रण बनाएर हात तथा न’ङमा दैनिक लगाउँदा फा’इदा हुन्छ।
-बे’सन, दही र बेसारलाई मि’लाएर बनाएको पे’स्ट हातमा लगाएर २० मिनेटपछि ह’लका स्क्र’ब गरेर हटा’उँदा पनि हात न’रम हुन्छ। -ख’स्रो छालाका लागि दुई चम्चा सु’र्यमुखी तेल, दुई चम्चा कागतीको रस र एक चम्चा चिनी मि’लाएर बनाएको पेस्ट लगाएर १५ मिनेटपछि वि’स्तारै स्क्र’ब गर्दा राम्रो हुन्छ ।
Prevझन् झन् चर्कि’यो राजाबादीको आ’न्दोलन ! माईतिघर देखि बानेश्वर सम्म मान्छेको ताती,केटाकेटि देखि बुढाबुढी
Nextअनिताको फेरि जटिलअप्रेसन गर्नुपर्ने भयो, अप्रेसन पछि अनितलाइ के हुनेछ? Binod Khadka & Anita Khadka